I-CUBBY - I-Airbnb
Yungaburra, Queensland, i-Australia
Ikamelo e-i-lodge ibungazwe ngu-Amanda
Kusukela ngaphakathi kwesimanje sikanokusho, ungathokozela imvelo kuyo. I-platypus, ezinye izilwane zasolwandle kanye nokuphila kwezinyoni kuyabonakala kusuka esidlweni sasekuseni / i-cocktail bar kanye nasebhavini lokugeza noma i-shower yangaphandle.
Isinqumo esikhulu okuzodingeka usenze ukuthi iyiphi indawo enhle ongayijabulela. Kukhona indawo yomlilo enhle kakhulu egeleza isuka ngaphakathi iye emphemeni, nayo ikwazi ukujabulelwa kusuka kubhavu.
*SICELA UQAPHELE: Inani lesevisi libekiwe futhi litholwe u-100% yi-Air BnB, hhayi umnikazi wendlu.
Isethwe kuma-acre angu-3.2, le ndawo enhle yokuphumula yakhiwa ngenjongo ngo-2020. Uma usungene e-Cubby, unobumfihlo obuphelele... ngaphandle kwempilo yezinyoni ezisebenzayo, i-platypus, izimfudu namanzi okuhudula. Ungase ube nenhlanhla yokuba nokuvakasha okuvela ku-golider yoshukela noma i-Lumholtz Tree Kangaroo..
Kuyindawo yokuhlala yangaphakathi / yangaphandle ngokuphelele, ingaphambili lonke lendlu eyakhiwe ngamapulangwe livuliwe. Kuneshawa engaphakathi nangaphandle kanye nobhavu omuhle wabantu abangu-2 emphemeni. Indawo yomlilo yegesi ihlukile...ungayibona kusukela ngaphakathi kuya ehlathini lemvula namanzi.
Inakho konke ongakucela.
Jabulela imisindo ye-Magpie Geese nempilo yezinyoni eningi.
Ukubona i-platypus izikhathi eziningi ngosuku kuqinisekisiwe... ngokuya kwesikhathi sonyaka.
Buka okungcono kakhulu kwe-Milky Way eceleni kwembawula ngasechibini. Sicela uqaphele... izinkuni azinikeziwe, kodwa ziyatholakala endaweni yangakini.
Imizuzu engu-10 ukuya
e-Yungaburra Imizuzu engu-6 ukuya e-Lake
Eacham Imizuzu engu-20 ukuya ku-Windin Falls
carpark Imizuzu engu-25 ukuya eBartle Frere uhamba nge-carpark
Ngitholakala nganoma yimiphi imibuzo ngefoni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Yungaburra namaphethelo